Xil. Fowsiya: “Waxaa socda cirib tir loo qorsheeyay Soomaalida” - Latest News Updates
Xil. Fowsiya: “Waxaa socda cirib tir loo qorsheeyay Soomaalida”
Xildhibaan Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid mudanayaasha Golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay qasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan bar kontrol oo ku taala taallada Daljirka Dahsoon.
Qoraal ay xildhibaanadda soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in qaraxii maanta iyo qaraxyadii horay uga dhacay magaalada Muqdisho ay yihii kuwo lagu xasuuqayo shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa socda ciribtir ku socda Somali. Qaraxa maanta dhacay oo kamida kuwii hore u dhacay ee hal doorkii lagu laayay wuxuu daliil u yahay in ummadda Somaliyeed xasuuq loo qorsheeyay ku socdo. Waa in hay’adaha shaqada ku lihi keenaan stratiijiyad ka duwan tan hadda lagu maareeyo.
— Fawzia Yusuf H. Adam (@FawziaYusufAdam) May 22, 2019
“Waxaa socda cirib tir loo qorsheeyay Soomaalida” ayay tiri Xildhibaan Fowsiya Yuusuf oo sheegtay in la beegsanayo hal doorka shacabka si aanay bulshadu u gaarin hadafkeeda ku saabsan danaha dalkeeda.
Dhinaca kale Xildhibaanadda ayaa ka dalbatay hay’adaha ammaanka inay la yimaadaan istiraatiijiyad ka duwan tan iminka lagu maareeyo nabadgelyada isla markaana looga hortegayo kooxaha caadeystay xasuuqa shacabka Soomaaliyeed.
Qaraxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sababay inuu hakad ku yimaado kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada Baarlamaanka kaddib markii uu u baaqday kooram la’aan bacdamaa waxyeello soo gaartay Mudanayaal ku sii socday xarunta Baarlamaanka.
Previous article“Kenya waxa ay si toos ah xiriir ula yeelan doontaa maamul goboleedyada Soomaaliya”